Madaweynaha oo ka digay in ciidamo hubeysan lala galo goobaha doorashooyinka - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Madaweynaha oo ka digay in ciidamo hubeysan lala galo goobaha doorashooyinka
Madaweynaha oo ka digay in ciidamo hubeysan lala galo goobaha doorashooyinka
November 20, 2016 Duceysane4352 Comments on Madaweynaha oo ka digay in ciidamo hubeysan lala galo goobaha doorashooyinka
Madaweynaha ayaa uga mahadceliyey ciidamadda qaranka dowladda Federaalka Soomaaliya iyo ciidamada ammaanka dowlad gobolleedyada dalka ka jira sugidda ammaanka goobaha iyo magaalooyinka ay ka socdaan dorashooyinka aqalka hoose.
Madaxweynaha ayaa ku baaqay in aanan ciidamo hubeysan oo aanan ahayn kuwa ku howlan sugidda ammaanka goobaha codbinta aanan loo oggolaan gudaha iyo agagaarka goobaha ay ka socdaan doorashooyinka Aqalka Hoose.
Madaxweynaha ayaa ugu baaqay dhammaan hay’adaha hirgelinta doorashooyinka in tabashooyinka jira lagu xaliyo nidaamka oo baaritaano dhab ah laga sameeyo.
Ugu dambeyntiiMadaxweynaha ayaa sheegay inay muhiim tahay in waxii khilaaf ah ee jira ee si nabad ah ama dhaqan ah loo xalin waayo loo gudbiyo hay’adaha iyo guddiyada u xilsaaran si xal sharci ah looga gaaro oo waafaqsan hannaanka doorashooyinka ee lagu heshiiyey.
“Maadaama doorashooyin noocan oo kale ah aan dalka mudo ka badan 47 sano ah lagu qaban, haddana waxaan rabnaa in doorashooyinka ay ku soo gabogaboobaan si habsami leh ,Sidoo kale waxaan shacabka ugu baaqayaa inay kaalin wanaagsan ka qaataan sidii doorashoyinka noogu qabsoomi lahaayeen”.
20 ruux oo lagu soo qabtay howlgal ciidamada ay ka sameeyeen Degmooyinka Xamar Jajab iyo Waaberi
Wasiirka Batroolka oo laga joojiyay Tartanka Musharaxnimada Kursiga Aqalka Hoose
Burcad badeed Soomaaliyeed oo lagu xukumay dalka Mauritius
August 31, 2017 Cali Yare
Daawo: Wasiirka Warfaafinta Galmudug oo ka hadlay Arimo Xasaasi ah
2 thoughts on “Madaweynaha oo ka digay in ciidamo hubeysan lala galo goobaha doorashooyinka”
😷 You💋 don�t❤ need😖 aB-) reason💀 to🎵 help💻 people.